Aqoonyahano ka digay hoos u dhaca sarifka doolarka iyo sare u kaca cunada qutul daruuriga ah. – idalenews.com
Aqoonyahano ka digay hoos u dhaca sarifka doolarka iyo sare u kaca cunada qutul daruuriga ah.
Qiimo dhac aad balaaran ayaa ku yimid qiimaha lagu ka la sarifto lacagta doolarka iyadoo dhinaca kalana sare u kac uu ku yimid maciishada quutul daruuriga
Qaar ka mid ah aqoonyahanada iyo ganacsatada Soomaaliyeed eek u nool magaalada Muqdisho oo ka qeyb galayay barnaamijka Kulanka Jimacaha ee Warbaahinta Qaranka ayaa waxaa ay sharaxaad ka bixiyeen hoos u dhaca ku yimid lacagta doolarka iyo sare u kaca ku yimid maciishada qutul daruuriga ah.
Cabdullaahi Shiikh Max’ed Muftaax oo ah qabiir ku taqususay arimaha ganacsiga kala qeyb galayay barnaamijka ayaa ka hadlay ugu horeyn sababaha keenay in xiligani hoos u dhac uu ku yimaado doolarka maciishaduna sare u kacdo.
“ Een waxaa keeni kara saabao badan xaalada dhaqaalaha wadanka ,dhoofinta alaabaha aan dibada u dhoofino iyo kuwa aan ka keeno” ayuu yiri Cabdullaahi Shiikh.
Sidoo kale waxaa barnaamijka Aqoon yahan Cabdi Daahir Xasan Shiikh Yuusuf waxaana uu isna dhankiisa ka war bixiyay sababaha keenay hoos u dhaca qiimaha doolarka,waxaana uu sheegay in sababtaasi ay tahay badeecada dibada ka soo gashaa oo aad uga badan tan loo dhoofiyo.
Cabdullaahi Shiikh Max’ed Muftaax ayaa dowalada Soomaaliya ugu baaqay in ay dalka soo galiso shilin Soomaali farabadan si looga badbaado saameynta iyo sare u kaca maciishada qutul daruuriga.
Horaantii todobaadkii tagay ayaa waxaa magaalada Muqdisho si weyn looga dareemayay hoos u dhac weyn oo ku yimid sarifka doolarka halka uu sare u kacay qiimaha maciishada qutul dararuuriga kaasi oo saameyn weyn ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed haba ugu sii darnaatee dadka danyarta ah.